Fahamaizana teny Behoririka : manahy fandoroana niniana natao ny olona | NewsMada
Fahamaizana teny Behoririka : manahy fandoroana niniana natao ny olona
Maro ny fahasimbana, antapitrisany ny fahavoazana tamin’ny firehetana nitranga teny Behoririka. Saika niitatra tany amin’ny tobin-dasantsy Galana izany. “Mamofompofona asa ratsy”, hoy ny olona…
Fiara telo kila forehitra, lasa lavenona ny kidoro “éponge”, ary may ny hazo tamin’ny tambohon’ny EPP Behoririka, nahazo ampahan-trano amin’ny Galana ihany koa ny afo. Izany ny vokatry ny firehetana nitranga teny Behoririka, ny talata alina tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany teo. Niainga tamin’ny firehetana kidoro “éponge” mitoby eo amin’ny sisin’ny tambohon’ny EPP Behoririka ny firehetana, raha ny filazan’ny mpitandro filaminana. Vetivety ny fiitaran’ny afo, satria nijoalajoala izany ary niitatra tamin’ireo hazo, fiara teo akaiky teo, tafapaka hatrany amin’ny tranobe miray vodirindrina amin’ny Galana.
Nalady tonga teny an-toerana ihany ny mpamonjy voina na efa niredareda sy kila aza ireo kidoro sy ireo fiara Golf sy Mazda teo akaiky teo. Nananontanona ny Citic sy ny Galana ny loza, saingy matin’ny mpamonjy voina ara-potoana ihany ny afo.
“Tsy fantatra mazava ny anton’ny firehetana. Mandeha ny famotorana manodidina azy ity”, hoy ny fanazavana azo. Ireo olona teny an-toerana, mihevitra fa niniana natao ity firehetana ity. “Mety ho nisy olona niketrika zava-dratsy mihitsy izao. Mampanahy ihany ny fiantombohan’ny afo. Misy mpiambina ihany anefa eny an-toerana”, hoy ny olona teny an-toerana. Mampiahiahy, araka izany, ny toe-draharaha. Mifanandrify amin’ny raharaham-pirenena mafampana eto amintsika rahateo. Miseholany koa ny firehetana etsy sy eroa. Andrasana ny tohin’ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana.